Mi Amazfit GTS2Smart Watch – unique.com.mm
Mi Amazfit GTS2Smart Watch
Smart Watch လဲဝတ်ချင်တယ် … ဈေးကြီးမှာလဲကြောက်တယ် …
ဈေးသက်သာပြန်တော့လဲ … Function တွေမစုံမှာစိုးတယ် ...
စုံလင်တဲ့ နည်းပညာအချက်အလက်များနဲ့ တန်ဖိုးသင့် Smart Watch ထဲက အမိုက်စား Mi Amazfit GTS2Smart Watch လေး မင်မင်တို့ ယူနစ်မှာ ပစ္စည်းရောက်နေပြီနော် ...
Mi Amazfit GTS2Smart Watch လေးက မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေကို အဝေးကြီးကို လွင့်ထွက်သွားအောင်ကူညီပေးမှာပါ ...
Mi Amazfit GTS2Smart Watch ---> 168,000 Kyats
ပါဝင်တဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ ….
-1.65” AMOLED Bezel-less Display နဲ့ ဖြစ်ပြီး Always On Display ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မရွေး နာရီကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
-Aircraft-grade aluminum alloy ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Corning Gorilla Glass ဖြစ်တာကြောင့် ပွန်းရာခြစ်ရာထင်မှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ -လက်ဗွေရာ မထင်တဲ့ Anti-Anti-Finger Print Coating ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေအောက်အနက် 5ATM အထိ ယူသွားလို့ရတဲ့အတွက် ရေဒဏ်၊ ဖုန်ဒဏ်အတွက် လည်းစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
-လှမ်းသမျှခြေလှမ်း၊ သွားခဲ့တဲ့ အကွာအဝေး၊ အိပ်ချိန် နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေကို အသေးစိတ်တိုင်းတာပေးရင်း တစ်နေ့တာမှာ ခြေလှမ်းဘယ်နှစ်လှမ်း လှမ်းတာတွေ၊ လမ်းလျှောက်တဲ့ မိနစ်တွေကိုပါ အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးမှာပါ။
-Battery ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 246mAh ပါပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုမယ်ဆို (၇) ရက်ဝန်းကျင်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
-Weather, Compass, GPS တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ့်အပြင် ဖုန်းလာတာ၊ Message ဝင်တာက အစ Mi Amazfit GTS2Smart Watch ကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
-BioTracker 2PPG (Support Blood Oxygen) Sensor ပါဝင်တာကြောင့် သွေးထဲရှိ Oxygen ကို တိုင်းတာလို့ရမယ့်အပြင် Heart Rate အတက်အကျကိုလည်း စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မှာပါ
-Android အပြင် IOS ဖုန်းများနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ Mi Zepp Application ကို Install လုပ်ထားရပါမယ်။
-နာရီကိုလည်း Interface Design စိတ်ကြိုက်ပြောင်းသုံးနိုင်ပြီး နာရီမှာပါတဲ့ ဒီဇိုင်းများ အပြင် Mi Fit Application ကနေလည်း ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ် ….
-Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တာတွေကတော့ ......
• ဖုန်းကိုင်၊ ဖုန်းပြောခြင်း
• တစ်နေ့တာလှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းအရေအတွက်
• ခရီးရောက်တဲ့ စုစုပေါင်းအကွာအဝေး
• ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု
• နှလုံးခုန်နှုန်း တိုင်းတာပေးခြင်း
• ဘက်ထရီ Percentage
• Notification များဖြစ်သော (Phone Call, Messages, Email, Others)
ဈေးနှုန်းလဲသင့်ရမယ် …. Smart လဲကျရမယ် …
ဒါဆိုရင်တော့ Mi Amazfit GTS2Smart Watch ကိုသာရွေးချယ်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် ….
*** ဈေးနှုန်းမှာ Inclusive Tax 5% အခွန်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ***